Cotton & Canvas Bag vatengi uye fekitori - China Cotton & Canvas Bag Vagadziri
Masaga ekotoni akagadzirwa nevakagadziri uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, chinova chishuwo chisina kusimba kuseri kweChina kwehupfumi hweChina kweanopfuura makore makumi matatu. Mapurasitiki epurasitiki anounza nyore kuhupenyu hwevanhu uye zvakare anokonzeresa-kwenguva yakareba kukuvara kune zvakatipoteredza.
Nekuti plastiki haisi nyore kuora, kusvibiswa kwezvakatipoteredza kwakakomba kwazvo, saka kutenga kwepurasitiki kwave iko kunonyanya kukonzera kusvibiswa kwevachena, kuitira kudzivirira kusvibiswa kwevachena, kuitira kuvaka imba yedu yakanaka uye inoenderana, kutora zvakanaka kuchengetedza Nyika yedu, isu tinofanirwa kusimudza mureza wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kutora zviito zvinoshanda, kutakura masaga ekotoni, kuramba mabhegi epurasitiki, uye kupa mipiro kuchengetedza nharaunda.
Zvichienzaniswa nemabhegi epurasitiki, masaga ekotoni anogona kudzikisirwa uye haasvibise nharaunda.
Chinyorwa: bhegi redonje rakagadzirwa nekotoni yechisikigo, inova yakasvibirira zvakatipoteredza zvinhu.
Zvakanakira: Bhegi redonje idiki uye rinotakurika nekusimba kwakanyanya, uye rinogona kushandiswazve. Zvinotora nguva yakareba kushandisa uye hazvisi nyore kukuvara; Iyo jira rakapfava, nyore kupeta uye kutakura, nyore kuchenesa uye kwete nyore kudhaya, mitsara yakanaka, yakanaka kudhinda uye yekufungidzira mhedzisiro; Zvese zviri zviviri zvine hushamwari uye zvine fashoni, uye zvakachipa, chinova chigadzirwa chakakosha muhupenyu hwevanhu.
Yakasarudzika kugadzirwa: kwekushandisa: Yese Yakapakata Mabhegi, inodzivirira zvakatipoteredza waini machira emabhegi
Rutivi rwepazasi: nepasi uye nedivi, nepasi uye nedivi, pasina pasi nerutivi
Style: tsapo muhomwe, handbag, punching bhegi, shangu bhegi, mukwende bhegi
Kupurinda maitiro: silika skrini yekudhinda, kudhinda muchina, kupisa kwekudhinda, kudhinda kwefirimu, kudhinda kweoffset, kudirana, kushongedza kwemuchina, kudhirowa
Takura Canvas Bhegi Yekutenga Nyore
Chigadzirwa Nhanganyaya Mucheka wedonje wakagadzirwa nemucheka wedonje, uyo unobva pane zvakasikwa. Iyo ine yakanaka mweya kubvumidzwa, yakasununguka ruoko kunzwa uye iri nyore kudhaya. Mucheka wedonje une simba rekutorwa kwemvura uye une hutano hwakanaka. Inogona kubata zvakananga ganda uye haina kukuvadza muviri wemunhu, nekuda kwehunhu hwayo, inozivikanwa nevanhu uye inova yakakosha chigadzirwa muchivako. Zvichienzaniswa nemamwe machira, masaga ekotoni ane mikana isingaenzaniswi mukudhinda kwounyanzvi ...
Tsika Yakadhindwa Nhema Inotakurika Chena Canvas Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Yekutanga kusarudza jira. Mucheka wakanaka unogona kuwedzera mwenje wakawanda kubhegi rekudzivirira zvakatipoteredza. Iyo Jira rinofanira kutanga rasarudza iyo isina-yakarukwa jira isina mafata pamusoro, diki yakatwasuka uye yakatwasuka makakatanwa mutsauko uye rakaoma ruoko kunzwa. Iyo jira rakaomarara rinogona kusimuka, ratidza manzwiro akazara eiyo Yekuchengetedza bhegi, uye ichave inoshanda. Sarudzo yehuremu hwegiramu inoshanda. Zvirinani kuve ne glos ...
Picnic Kit Canvas Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Masaga ekotoni ane hushamwari zvakatipoteredza maererano nezvinhu zvakasvibirira; Zvakare, nekuti mutengo wemachira mumabhegi ekotoni wakakwirira kupfuura iwo weasina kurukwa machira, mabhizinesi uye zvikamu zvinovasarudza zvinowanzo tarisa zvakanyanya kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye zvine masimba masimba, zvinogona kudzikiswa pasina kusvibiswa kune zvakatipoteredza; Kusimba kwaro kwakakwirira zvakanyanya kupfuura kwemicheka isina kurukwa, uye mitsara yaro yakanaka uye yakanaka yekudhinda uye yekufungidzira mhedzisiro ndeye ...
Tsika Yakadhindwa Fashoni Yekutenga Bhegi Ine Rivets
Chigadzirwa Nhanganyaya Masaga ekotoni anoshandiswa semabhegi ekutenga nevanhu vakawanda nekuda kweakakora, akasimba, asingaremi, anotakurika uye ari nyore kuchenesa maficha. Zvakare, jira rekotoni inzvimbo-inoshamwaridzika zvinhu, iyo inogona kushandiswa panzvimbo pemapurasitiki. Zvichienzaniswa nemamwe machira, masaga ekotoni ane mikana isingaenzaniswi mukudhinda kwehunyanzvi, iyo inogona kushandiswa kwesilika kudhinda uye kudhinda kwekudhinda. Iyo bhegi redonje ine yakanaka kupisa kupisa uye inogona kudhinda vario ...